Hamro Online NewsNepal's Leading News Portal | शैलुङ्ग महोत्सवको ८० प्रतिशत तयारी पूरा - Hamro Online News
शैलुङ्ग महोत्सवको ८० प्रतिशत तयारी पूरा
रामेछाप: दोरम्बा गाउँपालिका–१ खोलाखर्कमा यही वैशाख १३ देखि १५ गतेसम्म हुन गइरहेको प्रथम शैलुङ्ग महोत्सवको ८० प्रतिशत तयारी पूरा भएको आयोजकले जनाएको छ ।
रामेछाप जिल्लाको दोरम्बा गाउँपालिका साथै दोलखाको शैलुङ्ग र मेलुङ गाउँपालिकाको संयुक्त आयोजनामा हुन गइरहेको शैलुङ्ग सांस्कृतिक तथा प्राकृतिक पर्यटन महोत्सव २०७६ को तयारी बारे पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरि जानकारी दिएको हो ।
महोत्सवको लागि खानेपानी, सरफाई लगायतका केही कामहरु बाँकी रहे पनि ८० प्रतिशत तयारी पूरा भइसकेको शैलुङ्ग महोत्सवका मुख्य अायोजक दोरम्वा गाउँपालिका अध्यक्ष कमान सिं तामाङले जानकारी दिए ।
तीनदिने महोत्सवको अवधिमा १० हजार पर्यटक भित्र्याउने उद्देश्य रहेको पनि तामाङले बताए । महोत्वसमा ७० लाख रुपैयाँ खर्च हुने आयोजकको अनुमान छ ।
महोत्वसको लागि दोलखा जिल्लाको मेलुङ र शैलुङ्ग गाउँपालिकाले ५/५ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । त्यस बाहेक महोत्सवमा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च रामेछापको दोरम्बा गाउँपालिकाले ब्यहोर्ने आयोजकको भनाई छ ।
महोत्सवमा स्थानीय उत्पादन, धार्मिक, संस्कार, संस्कृति झल्कने ८० वटा स्टलहरु रहने बताइएको छ । महादेव लगायत अनेकौं ऋषिमुनिहरुको तपोभूमिको रुपमा रहेकोे शैलुङ्गलाई शान्तिका दूत गौतम बुद्धले तपस्या गरेको पवित्र भूमिको रुपमा पनि चिनिन्छ । धार्मिक स्थल साथै जैविक विविधताले भरिएको शैलुङ्गमा एक सय वटा पहाडका थुम्कीहरु रहेका छन् ।
शैलुङ्गमा रहेको पर्यटक, धार्मिक, सांस्कृतिक तथा जैविक विविधतालाई राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा स्थापित गर्ने उद्देश्यले महोत्सव आयोजना गरिएको आयोजकको भनाई छ ।
तीन दिनसम्म सञ्चालन गरिने शैलुङ्ग महोत्सको उद्घाटन पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम तय भएको आयोजकले जानकारी दिएको छ ।
के हो शैलुङ्ग ?
रामेछाप र दोलखा जिल्लाको सीमानामा रहेको प्राकृतिक श्रोतले भरिपूर्ण र मनोरम स्थल हो शैलुङ्ग । शैलुङ्ग राजधानी काठमाडौंबाट १ सय ४० किलोमिटरको दुरीमा रहेको छ । नेपालको मध्य क्षेत्रको उच्च भागमा रहेको शैलुङ्ग ३ हजार १ सय ४८ मिटरको क्षेत्रफलमा फैलिएको छ । शैलुङ्ग क्षेत्रबाट नेपालको उत्तरी भेगमा रहेका हिमश्रृखला अवलोकन गर्न सकिन्छ भने महाभारत क्षेत्रको रमणीय बस्ती अवलोकन गर्न सकिन्छ ।
त्यसैगरी पर्यटकीय क्षेत्रहरु कालिन्चोक, चेरदुङ, लामजुरा डाँडा, पिके, खिजीदेम्वा, महाभारतको चुरे, नमोबुद्ध, नगरकोट, चिसापानी डाँडा, धुलीखेल, चन्द्रागिरी अवलोकन गर्न सकिन्छ । शैलुङ्ग आफैमा पनि प्रथम (सांङगे म्हामोर्चे) पाँचौं (पद्म सम्भव) र सातौ गौतम बुद्धले तपस्या गरेको पवित्र भूमि हो । शैलुङ्ग प्राकृतिक, जैविक, धार्मिक, साँस्कृतिक, जडिबुट्टी लगायत कृषि पर्यटनले समेत महत्वपूर्ण स्थल हो ।
शैलुङ्ग पर्यटन, जैविक, धार्मिक, साँस्कृतिक र पर्यावरणले आफैमा भरीपूर्ण ऐतिहासिक स्थल हो । शब्दमा शैलुङ्गको बयान गर्न कठिन छ । तर, शैलुङ्गमा पुग्दा नरम्ने मानिस कोही हुन्न । शैलुङ्गमा १ सय भन्दा बढी अति आकर्षक थुम्काहरु रहेका छन् । गुरुपद्म सम्भवले ५ वर्ष ध्यान गरेको स्थल हो शैलुङ्ग । शैलुङ्गबाट धौलागिरीदेखि मकालु, हिमालसम्म हिमश्रृंखलाको दृष्यावलोकन गर्न सकिन्छ ।
त्यसैगरी शेर्पा, तामाङ, थामी, नेवार, मगर लगायतका जनजातिहरुको रितिरीवाज हेर्न पाइन्छ शैलुङ्गमा । महाभारत क्षेत्रको एक प्रमुख रमणीय भूपरिधिमा पर्ने शैलुङ्गमा फागुनदेखि वैशाखसम्म लालिगुराँसले ढकमक्क ढाकेको देख्न सकिन्छ । असारबाट असोजसम्म घाँस र घाँसे फुलहरुले ढकमक्क ढाक्ने शैलुङ्गमा मंसिरदेखि माघसम्म हिउँ खेल्न पाइन्छ । शैलुङ्ग प्रवेश मार्गमा थुप्रै धार्मिक स्थलहरुको दर्शन गर्न सकिन्छ । पछिल्लो समय दोरम्बा होमस्टे वर्ष २०७६ समेत घोषणा भइसकेको छ ।
कहाँ कहाँबाट जान सकिन्छ शैलुङ्ग ?
थुप्रै नाका र सडकहरु प्रयोग गरेर शैलुङ्ग पुग्न सकिन्छ । सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको मुडे, दोलखा जिल्लाको चरिकोट, तामाकोशी र रामेछाप जिल्लाको देविटारमिल्ती, मन्थली, सित्खा, नेपालथोकको नाका तथा सडकहरु प्रयोग गरेर शैलुङ्ग पुग्न सकिन्छ । त्यसैगरी आदिवासी जनजाति पर्यटन पदमार्ग सिन्धुपाल्चोकको मुडे, दोलखाको मागादेउराली, ढुंगे, शैलुङ्ग खोलाखर्क, पर्यटन गन्तब्य गाउँ दोरम्बा हुँदै नेपालथोकसम्म ७ दिने पदयात्रा पनि सञ्चालन भइसकेको छ ।
दिक्षिणी भेगबाट यात्रा सुरु गर्दा राजधानी काठमाडौंबाट नेपालथोक, सित्खा, सुनकोशी पार गरि महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलहरु खाँडादेवि मन्दीर, अग्लेश्वरी, पर्यटकीय नमूना गन्तब्य बस्ती दोरम्बा हुँदै शैलुङ्गको पौराणिक गुम्बा पंगेरी गुम्बाको दर्शन गर्दै शैलुङ्ग पुग्न सकिन्छ । उत्तरी क्षेत्र हुँदै आउँदा सिन्धुपाल्चोकको मुडे बजारबाट उत्तरी हिमश्रृंखला अवलोकन गर्दै शैलुङ्ग जान सकिन्छ । त्यसैगरी पूर्वी भेगबाट आउँने पर्यटकहरु तामाकोशीको किनार हुँदै भैसे, गोठपानीबाट शैलुङ्गको रमणीय बस्ती, झोर, मनगाउँको अवलोकन गर्दै शैलुङ्ग पुग्न सकिन्छ ।